किन आउँछ डन्डीफोर? हटाउन के गर्नु पर्छ ? – Nijgadh Fast Track News, Airport News and Latest News of Nijgadh Bara Parsa Rauthat & Middle Terai Region of Nepal::: Nijgadh.com Nijgadh Samachar Bara First online News
डन्डीफोर धेरै चिल्लो छालामा देखिने रोग हो। यसबाट जोगिन छालालाई ड्राई राख्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। जीवनशैलीमा ध्यान दिनुपर्छ। धेरै चिल्लो खानु हुँदैन। चकलेट धेरै खानेहरूलाई पनि डन्डीफोरको समस्या देखिन सक्छ। डन्डीफोर आएकाले तेलबाट जोगिनुपर्छ। कपालमा तेल हालेर बस्ने गर्नु हुँदैन। अनुहारको चिल्लो हटाउन क्लिन्जिङ गर्नुपर्छ। दिनमा तीनचारपटक मुख धुनुपर्छ। छालालाई सुक्खा बनाउने क्रिम लगाउनुपर्छ। डन्डीफोरले निकै नै दुःख दिएको छ भने एन्टिबायोटिक क्रिम लगाउने र औषधि खानुपर्ने पनि हुन्छ। साभार : नागरिक
कागतीमा अम्लीय गुण हुन्छ। गुलाबजलले भने छालालाई शीतल राख्छ। यी दुईलाई एकसाथ मिलाएर लगाउने हो भने यसले डन्डीफोर फैलिनबाट रोक्छ र डन्डीफोरका कारण उत्पन्न दागलाई मेटाउँदै लैजान्छ। यसका लागि कागतीको रसको दोब्बर मात्रामा गुलाबजल प्रयोग गर्नुपर्छ।
सुन्तलाको बोक्रालाई घाममा सुकाएर पाउडर बनाउने र यसमा गुलाबजल मिसाएर लगाउने गरेमा डन्डीफोर हराउँछ। यसका लागि सुन्तलाको बोक्राको पाउडरमा गुलाबजल हाली पेस्ट बनाएर अनुहारमा दलेर केही बेरपछि मनतातो पानीले धुने गर्नुपर्छ।
चन्दन पाउडरमा एन्टी–ब्याक्टेरियल गुण हुन्छ, जसकारण यसमा गुलाबजल मिसाएर पेस्ट बनाई अनुहारमा लगाउने र केही बेरपछि धुने गर्नाले डन्डीफोर आउँदैन र भएको डन्डीफोर पनि हराउँदै जान्छ।
मुलतानी मिट्टीमा गुलाबजल हालेर पेस्ट बनाई अनुहारमा दल्ने र केही बेरपछि पखाल्ने गर्नाले डन्डीफोरमात्र नभई अनुहारका दाग पनि हट्छन्।
अदुवा पिसेर यसमा गुलाबजल हाली अनुहारमा दल्ने गर्नुपर्छ। यसो गर्दा नयाँ डन्डीफोर आउने क्रम रोकिन्छ।